“ဖခင်မှ ..သမီးဖြစ်သူအား သင်္ကြန်ရေကစား၍ …ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ သမီးဖြစ်သူ… သေဆုံးသွားခဲ့မှု ဖြစ်ပွား” – ရွှေအလင်း
“ဖခင်မှ ..သမီးဖြစ်သူအား သင်္ကြန်ရေကစား၍ …ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ သမီးဖြစ်သူ… သေဆုံးသွားခဲ့မှု ဖြစ်ပွား”
ဖခင် မှ သမီးဖြစ်သူအား သင်္ကြန်ရေကစား၍ ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ သမီးဖြစ်သူ သေဆုံးသွားခဲ့မှု ဖြစ်ပွား
ယမန်နေ့ သင်္ကြန်အကျနေ့က အုတ်တွင်းမြို့ နယ် သရက်ချဉ်ကျေးရွာမှ မအေးအေးခိုင် အသက်(၁၅ ) နှစ်အား ဖခင်ဖြစ်သူမှ သင်္ကြန်ရေကစားခြင်းကြောင့် ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ နောက်စေ့အား ရိုက်မိသဖြင့် သတိလစ်မေ့မျော သွားခဲ့၍ အုတ်တွင်းဆေးရုံ မှ တောင်ငူဆေးရုံကြီးသို့ ရင်ခုန်သံ ရှင်/ကူ ယာဉ်ဖြင့် အရေးပေါ် ကူညီပို့ဆောင်ပေးခဲ့သော်လည်း သမီးဖြစ်သူမှာ သေဆုံးသွားခဲ့သဖြင့် အအေးခန်းအခေါင်း ဆင်ပေးထားခဲ့ပြီးသော်လည်း
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ညသန်းခေါင်ကျော်က အအေးခန်းအခေါင်း ဆင်ပေးထားသော မအိအိခိုင် အသက်(၁၅ ) နှစ်၏ နာရေးဖြစ်စဉ်မှာ ဖခင်မှ သင်္ကြန်ရေကစားခြင်းကို ရိုက်နှက်ဆုံးမရာမှ သေဆုံးခဲ့ရတာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် အလောင်းအား အုတ်တွင်းဆေးရုံရင်ခွဲရုံသို့ ရင်ခုန်သံ ရှင်/ကူ အသင်းမှ အခမဲ့ ထပ်မံပို့ဆောင်ကူညီပေးထားကြောင်း သိရပါသည်။ .
ဖခငျ မှ သမီးဖွဈသူအား သွင်ျကနျရကေစား၍ ရိုကျနှကျဆုံးမရာမှ သမီးဖွဈသူ သဆေုံးသှားခဲ့မှု ဖွဈပှား
ယမနျနေ့ သွင်ျကနျအကနြကေ့ အုတျတှငျးမွို့နယျ သရကျခဉျြကြေးရှာမှ မအေးအေးခိုငျ အသကျ(၁၅ ) နှဈအား ဖခငျဖွဈသူမှ သွင်ျကနျရကေစားခွငျးကွောငျ့ ရိုကျနှကျဆုံးမရာမှ နောကျစအေ့ား ရိုကျမိသဖွငျ့ သတိလဈမမြေ့ော သှားခဲ့၍ အုတျတှငျးဆေးရုံ မှ တောငျငူဆေးရုံကွီးသို့ ရငျခုနျသံ ရှငျ/ကူ ယာဉျဖွငျ့ အရေးပျေါ ကူညီပို့ဆောငျပေးခဲ့သျောလညျး သမီးဖွဈသူမှာ သဆေုံးသှားခဲ့သဖွငျ့ အအေးခနျးအခေါငျး ဆငျပေးထားခဲ့ပွီးသျောလညျး
လုပျထုံးလုပျနညျးအရ ညသနျးခေါငျကြျောက အအေးခနျးအခေါငျး ဆငျပေးထားသော မအိအိခိုငျ အသကျ(၁၅ ) နှဈ၏ နာရေးဖွဈစဉျမှာ ဖခငျမှ သွင်ျကနျရကေစားခွငျးကို ရိုကျနှကျဆုံးမရာမှ သဆေုံးခဲ့ရတာ ဖွဈခွငျးကွောငျ့ အလောငျးအား အုတျတှငျးဆေးရုံရငျခှဲရုံသို့ ရငျခုနျသံ ရှငျ/ကူ အသငျးမှ အခမဲ့ ထပျမံပို့ဆောငျကူညီပေးထားကွောငျး သိရပါသညျ။ .
တနေ့က မြောက်ဥက္ကလာပဆေးရုံကြီးကရင်ခွဲရုံမှာ သေလူတယောက်ဆီက လက်စွပ်ချွတ် မရလို့...
17 ရက်​ ဒီနေ့ နံနက်​ပိုင်း…မော်လမြိုင်မှာ အရေးပေါ်အခြေအနေရောက်နေပါပြီ :O
အောင်လအန် ဆန် နဲ့ ထိုး သတ် မယ့် ရှုံးပွဲ မရှိ စံချိန်ရထားသူ မိုဟာမက် ကရာကီ...
“သတိ​ပေး ​ကြေညာချက်​ ဒီရက်​ပိုင်းအတွင်း မိန်းကေ​လး ​တွေ​ရော...